‘टिभीएस एनटर्क १२५’ नेपालको प्रिमियम सेग्मेन्टमा सर्वाधिक रुचाइएको स्कुटर | Ratopati
उक्त भर्चुअल कार्यक्रममा टिभीएस एनटर्क १२५ का ब्राण्ड एम्बेसेडर अभिनेता प्रदीप खड्का र अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको पनि उपस्थीति रहेको थियो । ग्राहकका इच्छा र चाहाना अनुरुप यसले प्रदर्शन गर्न सकेका कारण यसले छोटो समयमा नेपालमा सफलता प्राप्त गरेको छ ।
यसमा सेग्मेन्टमा नै पहिलो स्मार्ट कनेक्ट फिचर दिएको छ, जसमा चालकलाई हेल्मेट वार्निङ, ब्लुटुथ कनेक्ट, कल अर्लट, एमएस अर्लट, जीपीएस, टन वाइ टर्न नेभिगेशन जस्ता कि फिचर रहेको छ । एनटर्कको सिग्नेचर हेड ल्याम्प र टेलिथ एयरक्राफ्ट डिजाइनको टेलल्याम्पले यसलाई स्पोर्टी मात्र बनाएको छैन सडकमा जो सुकैको ध्यान खिच्न सफल भएको छ ।
यससँगै दशैं तिहारलाई लक्षित गर्दै कम्पनीले ‘टिभीएस दशैंको आशा’ योजना पनि ल्याएको छ । ग्राहकहरुले टिभीएस मोटरसाइकलकमो खरिदमा रु. ९,००० नगद छुट पाउनेछन् भने स्कुटरको खरिदमा रु. ७००० नगद छुट पाउँनेछन् । साथै ग्राहकहरुले ०% ब्याजमा फाइनान्सको सुविधा पनि पाउँन सक्नेछन् र एक जना भाग्यशाली ग्राहकले लक्की ड्रमार्फत आरआर ३१० मोटरसाइकल पनि जित्न सक्नेछन् । यो योजना देशभरका टिभीएसको शोरुमहरुमा उपलब्ध हुनेछ ।
#टिभीएस एनटर्क १२५#best seller scooter